Nahoana no Tokony Havelanao Handalo Fotsiny Eoropeana Train Service | Save A Train
Home > Travel Europe > Nahoana no Tokony Havelanao Handalo Fotsiny Eoropeana Train Service
(Last Nohavaozina: 18/06/2020)
Miezaka foana izahay mba hahatonga ny fitetezam-paritany traikefa tsara kokoa sy hampihatra fomba isan-karazany sy ny tetika mba hamonjy ny vola, fotoana sy ezaka. Mifaly ny fialan-tsasatra any ampitan-dranomasina toerana ianao dia midika hoe te-hanao ny fotoana miavaka.
Ny olona izay efa nanao nankany Eoropa nankafy maro ny zavatra ao, Travel ny alalan 'ny Trans-European Railway Service dia tena iray tamin'izy ireo.
Eoropa dia ny kaontinanta ny sasany amin'ireo tena hafakely mpizaha tany toerana ary raha toa ianao mihevitra ho tia ny tsara indrindra fahitana ny tany tsara tarehy, andramo ny Trans-Eoropeana lamasinina fanompoana, izay afaka mankafy be dia be trano anisan'izany ny fiaran-dalamby tapakila boky an-tserasera. Mandehana amin'ny alalan'ny bilaogy sy mianatra ny antony Tokony Havelanao Handalo Fotsiny mahagaga ity fiaran-dalamby dia rehefa any Eoropa.
Rehefa lavitra Zava-dehibe Kokoa
Ho an'ny olona sasany, ny dia dia tonga zava-dehibe noho ny toerana indrindra fa rehefa ianao dia lavitra toy ny mpizaha tany. Raha any Eoropa, dia Aza Hadinoina ny fahafahana hijery ny tsara tarehy kaontinanta from akaiky.
Train dia manome anao ny fahafahana hahatonga ny Eoropa diany miavaka. Ankafizo ny mihaja fiaran-dalamby Tsidika ny tonga toerana maromaro ao Eoropa tamin'ny ny tombony azo amin'ny boky an-tserasera ny fiaran-dalamby tapakila safidy.
Ankafizo ny Best of Europe
Eoropa dia ny an-trano ny sasany amin'ireo fiaran-dalamby tsara indrindra mpandraharaha eto amin'izao tontolo izao, ary eto dia afaka mahazo izao tontolo izao-kilasy nandeha lamasinina na inona na inona no toerana halehany. Anarana lalamby, OBB, TGVLyria, Thalys ary Eurostar dia ny sasany amin'ireo mpitarika lamasinina mpandraharaha any Eoropa.
Afaka mankafy ny fanompoana fiaran-dalamby avy amin'ny tanàna eoropeanina maro ho tonga ny irina toerana ao anatin'ny Eoropa. Azonao atao ny mandeha avy Amsterdam ho any London, Berlin ho any Hamburg, Naples ny Roma, Milan ho Venice, London ho any Paris, London ho any Berlin, Vienna ny Munich ary ny maro hafa toerana. Ary ny tsara indrindra anjara dia afaka hankafy ny safidy ny boky ny lamasinina tapakila na oviana na oviana.
Buy ny Ticket Online
izany no tombony hafa ny tia kokoa Trans-European fiaran-dalamby service mankafy ny hatsaran-tarehy ny tany. izany tsy aiza na aiza ianao, ianao dia mbola afaka ny fiaran-dalamby tapakila boky an-tserasera. Raha efa nikasa handeha Amsterdam avy any Paris amin'ny angon-drakitra manokana, dia afaka hiarovana ny seza mampiasa ny famandrihana mialoha ny toerana. ianao dia afaka mitsidika ny fiaran-dalamby tranonkala ofisialy ny fahatelo-antoko lamasinina tapakila famandrihana mpanome tolotra sy ny Bokin'i ny tapakila mampiasa debit na ny carte de crédit avy na aiza na aiza amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby boky ny tapakila an-tserasera.
Ireto ny sasany amin'ireo antony Tokony Havelanao Handalo Fotsiny ny Trans-Eoropeana fanompoana lamasinina, rehefa any Eoropa. Manazava bebe kokoa momba ny fiaran-dalamby service, ny fandaharam-potoana, ary ny tapakila famandrihana toerana, dia afaka mitsidika – www.saveatrain.com
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Freasons-why-you-should-not-miss-trans-european-train-service%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / de ny / na / ru sy ny maro hafa fiteny.